Fiara fitaterana (INR)
Fitetezana ny seza fiara
01-04 olona (s)
01-07 olona (s)
01-13 olona (s)
Ny vidin'ny Luxury AC 45, AC 41, AC 27 SEATER COACH dia omena araka ny fepetra takiana.
FANAMARIHANA: Misy trano fandraisam-bahiny tsy tafiditra. Fivarotana fitaterana.
Rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Bhubaneswar tao amin'ny maraimbe / tolakandro, dia makà ary mandehana any Puri. Mankanesa any Dhauli (Ashokan Rock Edict sy Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Tempolin'i Konark Sun (ilay tranokala malaza malaza antsoina hoe "Black Pagoda"), Tempolin'i Ramchandi ary Chandrabhaga Beach. Mankao amin'ny hotely Puri. Mialatsiny & miala sasatra eo amoron-dranomasina / mivarotra any amin'ny tsenan'ny torapasika. Mijanona ao Puri amin'ny alàlan'ny fandaharanao manokana.
Ny maraina dia mitsidiha ny Tempoly Lord Jagannath malaza (tsy ankatoan'ny Hindoa) hijery ny maraina arati. Miverina any amin'ny hotely ary misakafo maraina. Avy eo dia fitsangatsanganana ho an'i Satapada (Chilika Lake-farihy lehibe amin'ny sira avy any Azia). Jereo ny tsiambaratelon'ny sambo dia mahita ireo mahaleotena Irrawaddy Dolphins sy ny vavan'ny ranomasina (fihaonan'ny ranomasina sy ny farihy amin'ny anarana hoe Chilika Lagoon). Miverina any Puri. Amin'ny fomba hitsidihanao any amin'ny Tempolin'i Alarnath. Mijanona ao Puri amin'ny alàlan'ny fandaharanao manokana.
DAY 03: PURI - BHUBANESWAR (FAMPIANARANA)
Androany dia manomàna sakafo maraina ary mijery ny trano fandraisam-bahiny ary mitsidika ireo tempoly hafa eo an-toerana toy ny: Temple Sonar Gourang, Tempolin'i Gundicha, Temple Temnath. Mandehana mankany Bhubaneswar. Amin'ny làlana handehananareo any amin'ny tanànan'i Raghurajpur, sary hosodoko, Tempolin'i Lingaraj, Tempolin'i Mukteshwar, Tempolin'i Rajarani sns. Jereo ny hotely. Mankanesa ary mitsidiha ny Khandagri-Udayagir Jain Caves. Ny takariva maimaim-poana ho an'ny mpivarotra eo an-tsena. Hijanona ao Bhubaneswar amin'ny fialan-tsasatra.
DAY 04: FAHAZAVANA BHUBANESA
Androany aorian'ny fandehanana mitsidika dia mitsidika ireo toerana fitsangatsanganana eo an-toerana toy ny: Nandankanan Zoo (Nakatona tamin'ny alatsinainy ary nisokatra tamin'ny PM 7.30 AM - 5.30), tranom-bakoka Tribal (Close to Monday), Andavanandro maimaim-poana any amin'ny Ekamra hata. Hijanona ao Bhubaneswar amin'ny fialan-tsasatra.
DAY 05: BHUBANESWAR (FIZARANA)
Ny maraina aorian'ny fandinihanandro dia mijery sy mandao anao any amin'ny seranam-piaramanidina mba hisambotra anao amin'ny sidina an-dalana ho an'ny dia fiverenanao.
Ity sanda ity dia manan-kery mandra-pahatongan'ny filazana fanampiny.
Tsy misy ireo trano fandraisam-bahiny ao amin'ity fonosana fanondrahana ity.
Ny vidin'ny rambon-trano AC 45-41-27 STR dia homena araka ny fepetra takiana.
Ny kilaometatra sy ny fandaharam-potoana dia hipoitra amin'ny garazy mba hikarakarana.
Ity fonosana ity dia tafiditra ao anatin'ny fotoana fohy, parking.
Ny loka dia fototra iray isaky ny isaky ny programa ary eo amin'ny teboka marimaritra iraisana, dia tsy azo raisina ho fanodinana.
Ny Price dia NETT ary tsy azo avaozina.
GST azo ampiharina amin'ny faktiora manontolo.